पुरस्कार: कसरी अनलाइन पुरस्कार खोज्ने Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 9, २०२० बिहीबार, मार्च ० 16, २०२० Douglas Karr
सार्वजनिक सम्बन्ध कम्पनिहरु सँधै सचेतना र आफ्नो ग्राहकहरु को लागी बदनामी निर्माण गर्न को लागी रहेछन्। एउटा ठूलो रणनीति हो पुरस्कार सबमिशनहरू। पुरस्कारको तपाईंको औसत ग्राहक पिच भन्दा बढि फाइदाहरू छन्:
पुरस्कार पीआर पेशेवरहरु लाई महान समाचार चारा प्रदान गर्दछ पिच समाचार र गुणहरू।
पुरस्कार साइटहरू र कार्यक्रमहरू प्राय: अत्यधिक प्रायः भेटिन्छन् प्रासंगिक दर्शकहरू, तपाईंको पहुँच चौडा पार्दै।
पुरस्कार साइटहरू प्राय: उच्च न्यायाधीशहरू प्रयोग गर्दछन् प्रभावशाली, त्यसैले उनीहरूको अगाडि तपाईंको ब्रान्ड पाउनु एकदम राम्रो छ।
पुरस्कारहरू छन् विश्वास र अधिकार संकेतकहरू कि तपाईं साझा र आफ्नो साइट र सामाजिक च्यानलमा पदोन्नति गर्न सक्नुहुन्छ।
समस्या, अवश्य पनि, कोसिस गर्दैछ पुरस्कार अवसरहरू खोज्नुहोस् स्थानीय समाचार पत्र वा अनलाईन ट्रेड प्रकाशनमा तपाईको प्रतिस्पर्धीको जीतको बारेमा पढ्नु भन्दा पहिले। प्रविष्ट गर्नुहोस् पुरस्कार दिइन्छ, अनलाइन पुरस्कार को एक व्यापक डाटाबेस।
केहि वर्ष पहिले PR मा काम गर्दा, मलाई केहि ग्राहक कम्पनी पुरस्कार फेला पार्न जिम्मा दिइयो। यो गुगललाई हुनु अत्यन्त डरलाग्दो काम थियो सबै भन्दा राम्रो कम्पनी पुरस्कार घण्टा र घण्टा ... र घण्टा र घण्टाको लागि। त्यसैले केही महिना अघि, मेरो राम्रो साथी र मैले यो प्रक्रिया धेरै सजिलो बनाउन डेटाबेस शुरू गर्यौं। चाहे तपाईं मार्केटिंगमा हुनुहुन्छ, PR, एक व्यवसाय मालिक, संचार, एचआर - हामी आशा गर्दछौं कि यो साइटले तपाईंको जीवन अलि सजिलो बनाउँदछ। निक Pennebakerसह-संस्थापक
पुरस्कारले तपाईंलाई पुरस्कारको पाठ खोजी गर्न साथै क्षेत्र र कोटीद्वारा फिल्टर गर्न अनुमति दिन्छ। पुरस्कार, संगठन, र कोटी र क्षेत्र को लिंक परिणाममा प्रदान गरियो।
यदि मेरो इच्छा छ भने, यो पुरस्कारको चलिरहेको मिति दायरा पनि हो - यो केवल राम्रो हुनेछ कि पुरस्कार that० दिनमा पेश गर्नका लागि उपलब्ध थिए कि हरेक पुरस्कार बाहिर बाहिर देखीरहेको थियो। तर हे - यो एक महान सुरुवात को एक हेक हो। परिश्रमको लागि निक लाई धन्यबाद!
टोपी टिप गर्न जेम्स हन द्वितीय पुरस्कारलाई मेरो ध्यानमा ल्याउनका लागि!
टैग: पुरस्कारपुरस्कार डाटाबेसपुरस्कारपुरस्कार खोज्नुहोस्पुरस्कार अनलाइन खोज्नुहोस्निक Pennebakerprसार्वजनिक सम्बन्ध